Vondron Moana Sands: manokatra Resort Rarotonga Vaovao any amin'ny Nosy Cook
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Vondron Moana Sands: manokatra Resort Rarotonga Vaovao any amin'ny Nosy Cook
Mitohy amin'ny tanjon'izy ireo ny fanitarana sy ny faharetana maharitra any amin'ny Nosy Cook, ny mpiara-miombon'antoka amin'ny Pacific Resort Hotel Group, Moana Sands Group dia faly nanambara ny fisokafan'ny ofisialy ny Moana Sands Lagoon Resort, miorina eo amin'ny farihin'i Muri malaza, Rarotonga .
Fotoam-panokafana fohy ho an'ny fianakaviana no natao tamin'ny 31 May 2018, ary amin'ny endriny tena izy ny Nosy Cook, dia notahiana sy nohosorana ilay tranobe ary ireo trano rehetra, talohan'ny nizaran'ireo tompony Iaveta sy Ruta Short teny vitsivitsy. “Tany am-boalohany dia nanapa-kevitra ny hanorina tokantrano roa izahay eto amin'ity tany ity fa satria efa manana trano ao Rarotonga ny fianakaviana dia nisy dikany ny fananganana kompleks Moana Sands vaovao hanampiana sy hamenoana ireo fananana Moana Sands roa hafa ao Titikaveka. Ho lova ho an'ny fianakaviantsika sy ny hoavintsika izany. Feno fankasitrahana izahay noho ny fanohanan'ny fianakaviana manana tany izay ao aorianay hatramin'ny nanombohan'ny tetikasa ”.
Mirehareha amin'ny efi-trano miisa 24 miorina ao amin'ny faritry ny morontsiraka misy rihana roa, izay asehon'ireo fomba fijery kanto sy patio na lavarangana, ireo fotodrafitrasa maoderina dia noderain'ny dekora polinesianina maoderina. Miara-miasa amin'ny Deluxe Deluxe Lagoon Studios 22 sy ny Suites Lagoon 2, ny efitrano misy mari-pana rehetra dia manolotra ny fividianana antenaina antokon'ity kaliber ity.
Ny ivon'ny toeram-pialan-tsasatra dia ny dobo filomanosana ranon-dranomasina misy sary famantarana, feno ny tokotanin-tsandrin'ny masoandro ary bara fitoviana ambony Ny vahiny koa dia afaka mankafy ny tara-masoandro sy ny fomba fijery avy amin'ny trano fisakafoanana Laguna eo an-toerana sy fisotroana, izay nosokafana ho an'ny fanompoana Alatsinainy 16 Jolay 2018.
Moana Sands Lagoon Resort dia mandray ireo vahiny 18 taona no ho miakatra, ka io no toerana mety indrindra ho an'ireo izay mitady fialantsasatra amam-pitiavana, mpivahiny irery na ireo izay manao dia lavitra. Ny fananana vaovao indrindra dia mankasitraka ny vondrona Laut Sands misy folio an'ny fianakaviana Moana Sands Beachfront Hotel sy Moana Sands Beachfront Villas, izay hita any atsimo amin'ny Rarotonga, manamorona ny morontsiraka Titikaveka sy Vaimaanga.
Pacific Resort Hotel sy Moana Sands Groups dia faly amin'ny fitomboan'ny fivoaran'ity fampandrosoana vaovao ity, manome honenana maoderina lafo vidy ao amin'ny toeram-pizahan-tany malaza Muri, ary ireo fotoana mety ho azon'ny trano omena ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana.
55,000 ny mpandeha any amin'ny firenena eropeana dimy voan'ny fitokonan'ny mpanamory fiaramanidina Ryanair
Hafatra momba ny fizahantany Cook Islands: Mamandrata aloha!